Global Voices teny Malagasy » Mamolavola lalàna hifehezana ny aterineto sy ny famahanam-bolongana i Kambodza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Janoary 2009 9:16 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Kambodza, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Teknolojia, Zavakanto & Kolontsaina
Eo ampandrafetana ny lalàna hanitarana ny ny lalàna misy ankehitriny hisahana ny endrika fampitam-baovao hafa, ka tafiditra amin'izany ny aterineto  ny minisiteran'ny fampahalalam-baovao Kambôdziana. Araka ny fanadihadiana tsy ara-panjakana moa dia mihoatra ny 70 000 ankehitriny ny isan'ny mpampiasa aterineto any Kambôdza amin'izao fotoana izao.
Hanitatra ny andraikitry ny Minisitera hiatrehana ny firoborobon'ny serasera any Kambôdza ity lalàna vaovao ity. Miisa 25 ny radio ary 7 ny fahitalavitra any Phnom Penh amin'izao fotoana izao. Nolazain'ny fitondrana anefa fa tsy tafiditra amin'ity lalàna vaovao ity ny vohikala vaovao . Hoy i The Mirror :
Nambaran'ny minisiteran'ny fampahalalam-baovao fa tsy tafiditra amin'ity lalàna vaovao ity ny famoaham-baovao (tahaka ny gazety) an-tserasera, fa ny tena sahaniny dia ny singan'ny haino aman-jery, lalao, fandaharana mampiala voly na mampifalifaly amin'ny alalan'ny aterineto, hisian'ny fanajana ny soatoavina.
Hifandraika kosa amin'ny famoahana an-tsary sy feo amin'ny alalan'ny aterineto an'antso finday kosa ity lalàna ity. Efa fampiasan'ny sarambamben'ny olona hihainoana radio, ijerena tele, andefasana hafatra am-peo sy an-tsary nandritra ny taona maro moa ny fiantsoana finday.
Te-hanome toky amin'ny fampanajana ny fomba tsara ny minisitera eo anatrehan'ny mety ho fiantraikan'ny haitao vaovao eo amin'ny fiaraha-monina.
Na dia mitombo aza ny andraikitry ny minisiteran'ny fampahalalam-baovao, dia nolazain'ny minisitry ny fampahalalam-baovao fa tsy manana fikasana hafa ankoatra ny fanajana ny fomban-drazana sy ny soatoavina izy. Noraisiny ohatra fa raha misy lalao an-tserasera mety hanimba ny zaza, na ny tanora, na ny fiaraha-monina Khmer amin'ny ankapobeny dia anjaran'ny minisiterany ny mampitandrina na manala ny alalana azon'izay namorona izany amin'ny fiarahany miasa amin'ny fahefana miandraikitra izany.
Norafetina taorian'ny nampisehoan'ny vohikala Reahu.net  an'ilay olon'ny lanitra ivavahana Apsara mila hiboridana nomelohin'ny fitondrana ity lalàna vaovao ity.
Notsongain'i Ka-set ny tenina mpiasam-panjakana iray manambara fa entina mahafantatra kokoa ny tompon'andraikitra misahana izay misy any amin'ny aterineto  ity lalàna vaovao ity :
Nanome ohatra hafa ny minisi-panjakana: “raha mampiseho sarina vehivavy mpanao sarimihetsika tsara tarehy atambatambatra amina vatam-behivavy miboridana ny vohikala iray, tsy fantatra mazava izay minisitera tokony handray an-tanana ny raharaha amin'io fotoana io, ny minisiteran'ny kolontsaina ve? sa ny atitany? amin'ny alalan'ity lalàna vaovao ity no amaritana fa ny minisiteran'ny fampahalalam-baovao no hiandraikitra ny fanarahamaso izay ampitaina an-tsary sy feo” hoy ny filazan'ilay mpiasam-panjakana.
Na dia ny vahiny tsy mahay miteny tsara ny fiteny ao an-toerana aza dia horarana tsy azo halefa amin'ny onjam-peo sy sary:
Misy ny miteny Khmer amin'ny firoky vahiny! zava-manohina antsika izany. Amin'ny alalan'ity lalàna vaovao ity, dia tsy maintsy taranaka Kambôdziana, afaka mamaky sy maneho hevitra araka ny lalànan'ny fitsipi-pitenenana Khmer ry zareo. Tsy ho afaka hiasa intsony ny mpanentana vahiny miteny Khmer, noho ny tsy fahaizan'izy ireo manonona sy miroky azy.
Misy ary ny vondrona haino aman-jery sy mpamaham-bolongana no mitsikera ity lalàna ity. Manahy i Vuthasurf fa toa entina hampanginana tsikera amin'ny aterineto ity lalàna ity :
Raha ho lany ity lalàna ity dia hatahotra ny hamoaka lahatsoratra mitsikera ireo mpamaham-bolongana zatra mitsikera ny fanjakana. Ary dia ho fitaovana entina hanaraha-maso sy hampanginana ny aterineto sy ny mpamaham-bolongana Kambôdziana.
Nanamarika ny fikambanana Kambôdziana miaro ny mpanao gazety (CAPJ) fa “tsy misy tranga lehibe tamin'ny aterineto nanana fiantraikany ratsy tamin'ny fiaraha-monina Kambôdziana.” Nampian'ny vondrona fa :
Taratra fa mampihatra ny lalàn'olo-tokana ny fitondram-panjakana amin'ny fanaraha-maso ny momba ny fifandraisana rehetra. Manahy izahay fa toa fitaovana entina hanapenam-bava ireo mpamaham-bolongana fatra-pitsikera ny fitondrana ity lalàna ity ka miantso ny fanjakana izahay mba hoheverina indray aloha ny momba ity volavola ity.
Lavin'ny  fitondrana fa entina hifehezana ny aterineto izy ity. Itrikitrihany ary fa “ny fampitam-baovao vita printy sy ny haino aman-jery ihany no tena kendren'ity lalàna ity.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/01/16/1444/
 vohikala vaovao: http://cambodiamirror.wordpress.com/2009/01/09/the-ministry-of-information-has-the-intention-to-regulate-publications-on-the-internet-thursday-812009/
 misy any amin'ny aterineto: http://cambodia.ka-set.info/powers/news-internet-law-information-control-regulations-090105.html?comment_id=85&joscclean=1
 hampanginana tsikera amin'ny aterineto ity lalàna ity: http://www.vuthasurf.com/2009/01/14/new-draft-law-to-regulate-internet-and-bloggers/
 vondrona fa: http://cambodiatonight.blogspot.com/2009/01/cambodian-media-group-opposes.html